MBA ee Teknolojiyada Macluumaadka 2021 Faahfaahinta, Syllabus iyo Xirfadaha: Warka Dugsiga ee Hadda
MBA ee Teknolojiyada Macluumaadka 2021 Faahfaahin, Syllabus iyo Xirfado
Ma rabtaa inaad hesho MBA ee Teknolojiyada Macluumaadka? Teknoolojiyadda warfaafinta ayaa udub dhexaad u ahayd dib-u-qeexidda waxa loola jeedo in la shaqeeyo, in si fiican loo shaqeeyo, wax soo saar la sameeyo, iyo in la bixiyo adeeg qiimo leh. Waxay bartaa ardayda sida loo maareeyo mashaariicda loona maareeyo kooxaha barnaamijyada. Akhriso si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
MBA-da 'IT' waxaa caadi ahaan lagu qabtaa injineerada barnaamijyada, maamulayaasha macluumaadka nidaamka, iyo shaqaalaha kale ee jagooyinka u baahan hoggaanka iyo xirfadaha maamulka.
Ku saabsan MBA ee Teknolojiyada Macluumaadka
Waa maxay MBA-ga IT-da oo dhan? Waa maxay baaxadda la xidhiidha goobtan? Muxuu ka kooban yahay koorsadu?
MBA-da 'IT' waxay diiradda saareysaa ganacsiga, abaabulidda, iyo dhinaca dhaqaalaha ee warshadaha IT-ga halkii ay ka ahaan lahayd lowska iyo boolal barnaamijyada ama cilad farsamo. Waxay bartaa ardayda sida loo maareeyo mashaariicda loona maareeyo kooxaha barnaamijyada.
MBA-da 'IT' waxaa caadi ahaan lagu qabtaa injineerada barnaamijyada, maamulayaasha macluumaadka nidaamka, maareeyayaasha mashruuca, injineerada shabakadda, iyo shaqaalaha kale ee jagooyinka u baahan hoggaanka iyo xirfadaha maamulka.
Jawiga tartanka, hal-abuurnimadu waxay keentaa natiijooyinka ganacsiga. In kasta oo ururada mar-hogaamiyayaashu ay ku sii nagaan karaan in muddo ah bilaa hal-abuurnimo, haddana waxaa loo dejiyay inay si dhakhso leh u qabtaan tartanka.
Qodobkaan, waxaa lagaa dhigi doonaa inaad si qoto dheer u falanqeyso MBA ee IT (Teknolojiyada Macluumaadka) sida muddada koorsada, u-qalmitaanka, kulleejooyinka, gelitaanka, manhajka, khidmadaha, shaqooyinka, iyo mushaharka.
Maxay Tahay Inaan Kasbado Shahaadadan?
Waa maxay MBA-ga IT-gu?
MBA ma lagama maarmaan u tahay inay noqoto Maamulaha IT-ga?
MBA ee Guudmarka Koorsada IT
MBA ee Muddada IT
MBA ee U-qalmitaanka IT
MBA gudaha IT Kulliyadaha
MBA ee Aqoonsiga IT
MBA ee IT Syllabus
MBA ee Khidmadaha IT-ga
MBA ee Shaqooyinka IT iyo Rajada Shaqada
MBA ee IT Mushaharka
Ubucda barnaamij kasta oo MBA ah waxaa ku yaal manhaj ku saabsan maaraynta ganacsiga, istiraatiijiyadda, iyo dhaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, ganacsigu wuxuu ku shaqeeyaa macluumaadka, iyo adduunka maanta, macluumaadka waxaa lagu wadaagayaa tikniyoolajiyadda.
Hadday teknolojiyaddu ku timaaddo qaab diiwaan lacageed, bakhaarro xog ah, ama wax soo saar aalado robot ah, ogaanshaha sida loogu daro shirkad waxay muhiim u tahay ganacsiga casriga ah.
MBA ee Teknolojiyada Macluumaadka waxay isku daraysaa maareynta ganacsiga iyo aqoonta tikniyoolajiyada barnaamijka qalin-jabinta ee horumarsan.
Inkastoo Barnaamijyada MBA dhaqan ahaan waxay qaadataa laba sano oo waxbarasho waqti-buuxa ah, barnaamijyada qaar waxay qaadan karaan oo keliya hal sano oo waxbarasho ah si loo dhammaystiro. Ardayda sidoo kale waxay lahaan karaan ikhtiyaar ay ugu qaataan shaqadooda koorsada meel fog iyadoo loo marayo barnaamijka MBA ee khadka tooska ah.
Iyada oo ay sii kordhayaan ganacsiyada ama ku darista joogitaanka internetka ama bixinta iibka tooska ah ee internetka, MBA ee barnaamijka Teknolojiyada Macluumaadka ayaa ganacsatada siineysa faham ballaaran oo ku saabsan maareynta dadka, ganacsiga elektarooniga ah, iyo amniga.
Bilaabida ganacsi cusub waxay u baahan tahay xirfado laga heli karo barnaamijyada MBA, iyo adduunyada casriga ah ee ku saleysan teknolojiyadda, ogaanshaha sida loo qorsheeyo kaabayaasha nidaamyada bilowga waxay horseedi kartaa koritaan mustaqbal wanaagsan.
Shaqaalaha maareynta ayaa sidoo kale ka faa'iideystay faa'iidada MBA ee Teknolojiyada Macluumaadka iyaga oo siinaya aragti fikradeed iyo horumarinta ganacsi si loogu beddelo isbeddellada teknoolojiyadda.
Barnaamijyada MBA waxay ardayda iyo xirfadleyda siisaa aasaas adag oo ku saabsan xirfadaha maaraynta, iyo u fiirsashada tikniyoolajiyada macluumaadka ayaa ka caawineysa inay ku sii wadaan dhaqankooda ganacsi hadda.
MBA ku jirta IT-ga ayaa ku siin doonta xirfadaha loo baahan yahay si loo maareeyo nidaamyada IT-ga iyo shaqaalaha labadaba, iyadoo la isku darayo aqoonta ganacsi ee soo jireenka ah ee MBA oo leh koorsooyin gaar ah oo ku saabsan amniga macluumaadka, isgaarsiinta iyo maareynta mashruuca IT-ga, in yar oo ka mid ah.
In kasta oo MBA aysan daruuri u ahayn wixii la soo dhaafay si uu u noqdo maamule guuleysta ee IT-ga, haddana xirfadihii ay soo bandhigeen MBA ayaa sii kordhaya lagama maarmaan u ah IT wuxuu noqdaa mid ku sii qulqulaya dhammaan warshadaha iyo howlaha ganacsiga.
Haddii aad tuurto dhammaan tiknoolajiyada cusub ee cusub iyo shirkadaha ku saleysan IT-da ee dhowaan soo kordhay - iyo kuwa suurtagalka ah ee sugaya in la aasaaso - markaa MBA-ga IT-ga wuxuu bilaabmayaa inuu u ekaado inuu si dhab ah u adkeeyay meeshiisa MBA takhasusyo.
Shirkaduhu waxay u baahan yihiin maskax jilicsan si ay ula macaamilaan dhinacyada ganacsiga iyo dhinacyada farsamada ee lacagta ganacsiga.
MBA ee Teknolojiyada Macluumaadka waa koorso maarayn shaqo ah. Waa barnaamij tacliin heer-sare ah.
Barnaamijka waxbarashada waa 2 sano oo dheer. Musharrixiinta dhammeeyey Shahaadada Bachelor-ka ee Jaamacad / Machad la aqoonsan yahay ayaa xaq u leh inay sii wataan koorsadan.
MBA waa koorso maarayn guud ah. Waxaa sidoo kale jira barnaamijyo takhasus gaar ah leh, oo diiradda saaraya qayb gaar ah / anshax.
MBA ee IT waa mid ka mid ah barnaamijyada takhasuska noocan oo kale ah. Tani MBA barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa anshaxa IT-ga (Teknolojiyada Macluumaadka).
IT waxay u taagan tahay Teknolojiyada Macluumaadka. Erayo fudud, IT-gu wuxuu ku saabsan yahay kaydinta, ilaalinta, gudbinta, soo-celinta, iyo u-beddelashada macluumaadka.
Si loo fuliyo howlaha kor ku xusan, Nidaamyada Macluumaadka ayaa la adeegsadaa. Nidaamyada macluumaadka waxay ka kooban yihiin qalab, softiweer, shabakado, iyo xog-ururin.
Saameynta IT-da ee howlaha ganacsiga ayaa kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Maalmahan, nidaamyada IT-ga waxay door weyn ka ciyaaraan hawl maalmeedka hawlgallada MNCs, Ganacsiyada, Bangiyada, Cusbitaalada, Hay'adaha Dowladda, iyo Warshadaha kale.
Si loo maareeyo loona shaqeeyo nidaamyadan IT-ga ah, hay'adaha kor ku xusan waxay u baahan yihiin maareeyayaal xirfad leh oo IT ah. Tani waa halka koorsada sida MBA ee IT-ga ay anfacayaan. Ujeedada ugu weyn ee MBA ee koorsada IT-ga waa in lagu tababaro ardayda meelaha soo socda -
Marka la soo koobo, koorsadu waxay ardayda ku tababbaraysaa maareynta IT-ga iyo qeybaha ay xulufada yihiin. Barnaamijka tacliinta waxaa loo yaqaanaa inuu culeysto maareeyayaasha xirfadaha IT-ga.
Barnaamijka waxbarashada waa 2 sano oo dheer. Sannad dugsiyeed kasta waxaa loo qaybiyaa 2 semestar. Sidaa darteed, koorsada oo dhan waxay ka kooban tahay 4 semestar.
Shahaadada waxbarasho ee ugu yar ee loo baahan yahay waa - dhameystir koorsada Shahaadada Bachelor-ka ee Jaamacad / Machad la aqoonsan yahay.
Waxaa jira kulliyado badan oo Dowladda iyo kuwa Gaarka loo leeyahay ah oo kuyaala Hindiya oo bixiya koorsadan. Kulliyadaha dowladda waxay qaadaan khidmado kayar kuwa dhiggooda ah.
Machadyada sumcadda leh waxay ku tiirsan yihiin nidaamka oggolaanshaha ku saleysan mudnaanta. Machadyada noocan oo kale ah waxay adeegsadaan imtixaannada gelitaanka ee khuseeya si ay u doortaan musharrixiin u qalma. Machadyada qaar ayaa sidoo kale lagu yaqaan inay sameeyaan imtixaankooda uqalmida si ay uxulaan musharixiinta uqalma.
Qaar ka mid ah machadyada kale ayaa sidoo kale lagu yaqaan inay si toos ah u qabtaan iyo sidoo kale habraaca gelitaanka ku saleysan deeqda.
Waa kuwan qaar ka mid ah maaddooyinka muhiimka ah ee ku jira MBA manhajka IT-ga -
DBMS (Nidaamyada Maareynta Macluumaadka)
Maareynta Nidaamka IT
Maareynta Ganacsiga E-Ganacsiga
Khidmadaha laga qaado barnaamijka tacliinta waxay ku kala duwanaan karaan machadyada kale. Kharashka koorsada wuxuu kuxiranyahay qodobadan soosocda -
Nooca machadka (Dowladda, Gaarka loo leeyahay, Caawiyay, iwm)
Xaaladda iyo qiimeynta kulleejada
Xaaladda deeqda waxbarasho (ee ardayga, haddii ay khuseyso)
Kulliyadaha dowladda ayaa lagu yaqaan inay ka qaadaan khidmad yar. Iskucelcelis khidmadaha kulleejooyinka gaarka loo leeyahay waxay noqon karaan meel u dhexeysa 80-150K INR xilli-dugsiyeedkiiba.
Maamulayaasha IT-da waxay leeyihiin fursado shaqo oo kala duwan oo laga heli karo hortooda. In kasta oo shirkadaha IT-ga ay yihiin shaqaaleeyeyaasha ugu sarreeya, haddana waxay kaloo shaqaaleeyaan MNCs, Warshado, Waaxyaha Dowladda, iyo Ganacsiyada ku tiirsan IT-ga.
Qaar ka mid ah shaqaaleeyayaasha koowaad waa -
digital Media Shirkadaha
Shirkadaha Suuqgeynta Dijital ah
Shirkadaha Horumarinta Barnaamijka
Meelaha kor ku xusan, maareeyayaasha IT-du waxay ku deeqi karaan doorarka soo socda -
Ganacsigu sidoo kale waa fursad aad u fiican oo laga heli karo horjoogayaasha IT-ga. Iyagoo adeegsanaya aqoontooda, maareeyayaasha IT-gu waxay bilaabi karaan shaqadooda IT-ga ah. Dib-u-habeyn iyo u shaqeyn sidii lataliye IT-ga madaxbanaan ayaa sidoo kale suurtagal ah.
Mushaarka bilowga ee maamulaha IT-ga wuxuu kuxiranyahay dhowr arrimood. Qaar ka mid ah arrimaha caanka ah waa -
Machad uu murashaxu ka soo dhammaystay koorsada
Heerka waxbarashada (UG, PG, iwm)
Takhasuskiisa / ayada
Cinwaanka uu isagu / iyadu dooratay
Celcelis ahaan, mushaharka bilowgu wuxuu noqon karaa meel udhaxeysa 40-70K INR bishiiba. Marka laga hadlayo shaqo dowladeed, mushaharku wuxuu noqon doonaa sida ku xusan miisaanka mushaharka iyo darajada.
Waxaan aaminsanahay inaad hal ama laba shey ka baratay halkan. Iyo in macluumaadka kor ku xusan ay ku siisay qanacsanaanta aad u baahnayd ee ku saabsan MBA-ga IT-ga?
Waa maxay sababta aadan ula wadaagin asxaabtaada halkaas jooga adoo gujinaya batoonka saamiga ee boggan. Waxaad sidoo kale uqori kartaa macluumaad kale iyo qoraallo.
UNIMKAR Post UTME Su'aalo Hore 2021 & Jawaabo PDF Download
Xariirka Shaqaalaynta Kooxda Lorache 2021 lorachegroup.com
GRACELANDPOLY Post UTME Su'aalo Hore 2021 & Jawaabo PDF Download
RITMANUNI Qoraalka iyo Hagaha Codsiga Hubinta Dukumintiga iyo Nidaamka.
Barnaamijka Yale Young African Scholars Barnaamijka Cusbooneysiinta Ardayda Dugsiga Sare ee 2021
Qorista Shaqaalaha Jaamacadda Wesley 2018 | Tilmaamaha Codsiga iyo Shuruudaha
Tilmaamaha Codsiga iyo Habka Xaqiijinta SLU iyo Nidaamka.
Tags: MBA ee mustaqbalka xirfadda Teknolojiyada Macluumaadka, mba kulliyadaha teknolojiyada macluumaadka, MBA koorsooyinka Teknolojiyada Macluumaadka, MBA faahfaahinta Teknolojiyada Macluumaadka, mba shaqooyinka teknolojiyada macluumaadka, mba ee tiknoolajiyada macluumaadka ee internetka, MBA mushaarka Teknolojiyada Macluumaadka, mba xagga baaxadda tiknoolajiyada macluumaadka, mba ee manhajyada teknolojiyada macluumaadka, mba tiknoolajiyada macluumaadka ayaa u qalantaa, MBA ee IT 2020, maxaan ku samayn karaa mba tiknoolajiyadda macluumaadka
« Darajooyinka Ciidamada Nigeria - Halkan Ka Eeg Liiska buuxa ee Darajooyinka Ciidamada Nigeria
FCAI Toos Gelitaan Su'aalo Hore 2021 & Jawaabo PDF Download »